Abakhiqizi bePET - China Pet Factory & Suppliers
• Sihlinzeka ngosizo lwe-presales ngezindlela ezahlukahlukene, ngokwesibonelo, ukuklanywa kokuhlola kanye nesikhunta esivulekile semikhiqizo ngokuya ngezidingo zamakhasimende, sihlinzeka nge-Logo Printing njengezidingo zamakhasimende, njll.
• Thumela amasampula kumakhasimende njengesithenjwa
• Isabelomali sokutshalwa kwezimali: Sihlinzeka ngezinsizakalo zokuhlaziywa kwenzuzo yomkhiqizo, izincomo zomkhiqizo kanye nesabelomali esifanele.
Kulezi zinsuku, abantu abaningi bazocabanga ngomhlophe okokuqala lapho bekhetha umbala wamabhodlela epulasitiki. I-White iyasebenziseka impela futhi ingafaniswa nanoma yimuphi omunye umbala. Kodwa-ke, abantu abaningi banethemba lokuthi umbala wokupakisha komkhiqizo uzosebenza kakhulu futhi ucebe. Okuhlaza okotshani futhi umbala ojwayelekile futhi ubukeka unethezekile. Abantu abaningi bathanda iphunga elisha nelingokwemvelo lokuluhlaza, kepha kunzima ukuqonda umbala we-collocation ngaphandle kokuluhlaza okusemabhodleleni epulasitiki.
Ukupakisha okuphezulu. Ukupakisha okuphezulu kokuhlukaniswa ukusetshenziswa kwezinto ezinokuhlukaniswa okuhle kakhulu ukulawula umusi wegesi namanzi. Ukuhogela, ukukhanya, njll kuphakeji ukuqinisekisa ukusebenza kwezidakamizwa. Ukupakisha okuphezulu kokuhlukaniswa kuye kwasetshenziswa kabanzi eYurophu naseJapan. Kodwa-ke, i-China yethule i-PVDC namanye amaphakheji wokuhlukanisa aphezulu kusukela ngawo-1980, kepha ukukhula kwayo kuhamba kancane. Ngakho-ke, ukukhula kokufakwa okuphezulu kokuhlukaniswa kwezinto kuyindlela enkulu yokupakisha okuguquguqukayo kwezidakamizwa eChina;
Ikhwalithi yokubukeka yebhodlela leplastiki lezokwelapha: ibhodlela lezokwelapha eliqinile lomlomo ngokuvamile limhlophe. Ibhodlela lomuthi oketshezi lomlomo ngokuvamile linsundu noma lisobala, kanti eminye imikhiqizo yombala ingakhiqizwa ngokuya ngezidingo zamakhasimende. Umbala kufanele ufane, ngaphandle kokwehluka kombala okusobala. Ubuso kufanele bushelelezi futhi bushelelezi, ngaphandle kokukhubazeka okusobala nokuklwebheka, izimbobo zesihlabathi, amabala kawoyela namabhamuza. Umlomo webhodlela kufanele ubushelelezi futhi ubushelelezi.
Eqinisweni, ukuphepha kwamabhodlela e-PET akunakwehlukaniswa nezinzuzo zamabhodlela epulasitiki e-PET. Okokuqala ukuthi amabhodlela epulasitiki e-PET anesisindo esincane futhi aqinile ezintweni ezibonakalayo. Okwesibili ukuthi amabhodlela epulasitiki e-PET ashibhile ngentengo. Uma kuqhathaniswa nengilazi nokupakisha kwe-ceramic, inani lamabhodlela epulasitiki e-PET liphansi kakhulu. Okwesithathu, amabhodlela e-PET anesilinganiso esiphakeme sokusebenzisa kabusha, esiphakeme kakhulu kunamanye amabhodlela epulasitiki, alungele ukuphepha kwemvelo.
Okuqukethwe komswakama kokuqukethwe kumele komiswe ngokuphelele ngaphambi kokukhiqizwa. Ngokuvamile, izinga lokushisa lokumisa lingu-160 ℃ ngezinto ezomisiwe. Uma ligcinwe emoyeni isikhathi eside, ngeke limunce umswakama. Ngakho-ke, uma izinto zokusetshenziswa zomisiwe, kufanele zisetshenziswe ngokushesha noma ngqo nge-dryer eqhubekayo, ngaphandle kwalokho kufanele zigcinwe ku-incubator ku-90 ~ 100 ℃ kokubekwe eceleni, ukuze kugweme ukumuncwa komswakama futhi ngemuva kokumiswa.